भारतीय एक इन्जिनियरिङ कलेजको होस्टेलको खानामा सर्प भेटियो ! « Online Tv Nepal
भारतीय एक इन्जिनियरिङ कलेजको होस्टेलको खानामा सर्प भेटियो !
Published :5March, 2020 10:13 pm
भारतको आन्द्रा प्रदेशको सोरम्पालेम भन्ने ठाउँमा रहेको आदित्य इन्जिनियरिङ कलेजको होस्टेलको खानामा सर्प भेटिएको छ। उक्त कलेजमा तीन सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। रोटी बनाइ रहेको हालसालै भेटिएको भिडियोमा प्रशस्त मात्रामा झिंगा भेटिएको छ।
काठमाडौं, २२ फागुन । भारतको आन्द्रा प्रदेशको सोरम्पालेम भन्ने ठाउँमा रहेको आदित्य इन्जिनियरिङ कलेजको होस्टेलको खानामा सर्प भेटिएको छ। उक्त कलेजमा तीन सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। रोटी बनाइ रहेको हालसालै भेटिएको भिडियोमा प्रशस्त मात्रामा झिंगा भेटिएको छ।
उक्त भिडियो भेटिएको २ दिन हुन नपाउदै दालमा सर्प भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विद्यार्थीहरूले केही नखाई रातिको १ बजेसम्म धर्नामा बस्दा पनि कलेज प्रशासनले केही कदम नलिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई धर्ना नबस्न उल्टै धम्की दिएको कुरा बाहिर आएको छ ।